C/laahi Cameey oo wareegto adag kasoo saaray gaadiidka rakaabka iyo darawalada Puntland (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/laahi Cameey oo wareegto adag kasoo saaray gaadiidka rakaabka iyo darawalada Puntland (AKHRISO)
Wareegto maanta oo Khamiis ah kasoo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland C/xakiin C/laahi Xaaji Cumar Camey ayaa lagu sheegay in dhamaan gawaarida rakaabka ah la marin doono baaritaan adag.
Waxaa wareegtadaasi laamaha ammaanka ee Puntland lagu faray inay baaraan dhamaan dadka rakaabka ah ee wadooyinka ku safraaya, iyagoona sidoo kale la faray inay diiwaan geliyaan dhamaan darawalada gawaarida, taarikadda gaariga meesha uu ka yimid iyo halka uu u socdo.
Wareegtadaasi ayaa sidoo kale lagu sheegay in si adag loo baaro gawaarida, iyadoo la ilaalinayo sharafta muwaadiniinta, gawaaridaasi ha ahaato mid ku jeeda Koonfurta Soomaaliya ama gudaha Puntland.
Sidoo kale, dhamaan darawaladda gaadiidleyda ayaa wareegtadaasi lagu amray inay tagaan saldhiga magaalada ay rakaabka ka qaadayaan, marka ay dhamaystaan rakaabka, si loo siiyo cadeynta rarkiisa.
Arrintaan oo u muuqata mid aan fududeyn ayaa la is weydiin karaa culeyska ay keeni karto, marka la eego tiro badnida safarada gudaha Puntland ka jira, hadii la isku dayo in qorshahaan la fuliyo.
Si kastaba ha ahaatee, ilaa iyo haatan lama oga sida uu ku suurto gali karo amarkaan uusoo saaray madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland C/xakiin C/laahi Xaaji Camey, waxaana uu amarkaan qeyb ka yahay amaradda Puntland ay mudooyinkii dambe kusoo rogtay gaadiidka ka imaanaya Koonfurta Soomaaliya iyo kuwa ka shaqeeya gudaha Puntland.